November 24, 2020 - Padaethar
မိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းသွားတယ်
မိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းသွားတယ် ဥပေက္ခာတွေနဲ့ နေသားကျသွားတဲ့အချိန်ပဲ…အချစ်ကို လိုနေချိန်မှာ အချစ်မခံရတဲ့မိန်းမ၊ နွေးထွေးမှုကို တောင့်တနေချိန်မှာအေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခံရတဲ့မိန်းမ၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ကြင်နာတာတွေကို မျှော်လင့်နေချိန်မှာလျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမ အဲ့လိုမိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းသွားတယ်။ သူတို့လိုအပ်နေချိန်မှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မချစ်တတ် မကြင်နာတတ်တဲ့ဘဝမှာ နေသားကျသွားတဲ့အချိန်က ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ….. သူတို့အေးစက်သွားတဲ့အချိန်မှ လာပြီး ကြင်နာပြ ချစ်ပြနေရင် အပိုတွေ လာလုပ်ပြနေတယ်။ ဘာတွေလဲ စိတ်ရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်တွေ ဖြစ်ကုန်ရော… အနားမှာ လာကပ်နေရင်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်တွေ ဖြစ်နေတာ အမြဲတမ်း တယောက်တည်း ပစ်ထားခံရတဲ့ ဘဝမှာ နေသားကျနေတော့ လာပြီး ကပ်ချွဲနေလည်း မခံစားတတ်တော့ဘူးလေ….။ အထူးအဆန်းတွေ ဖြစ်နေတာအဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ ယောက်ျားလေးဘက်က ဘယ်လိုပဲ ချော့ချော့ ဘယ်လိုပဲ လိုက်လျောလိုက်လျော သူမဘက်က ဘာမှ … Read more
တစ်သက်လုံးမကွဲနိင်တော့တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲများမှာသာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်(၇)ချက်… ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ကွဲချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ဘက်က အတည်ပေမယ့် သူ့ဘက်က မတည်တဲ့အခါ မကွဲချင်ပေမယ့်လည်း ကွဲသွားရတဲ့ စုံတွဲတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ …။ ဒါကြောင့် ယခုလက်ရှိ မိမိဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့ တသက်လုံး မကွဲမကွာ ရှိသွားမလားဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အချက်တစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …။ ၁။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြောင်းအမြဲပြောခြင်း” ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ Relationship အစမှာပဲ ပြောရမယ့် စကားမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့တိုင်းလိုလို အမြဲလိုလို ပြောနေရမယ့် စကား ဖြစ်တယ် …။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမှန်တကယ်ချစ်ခင်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေအတွက်တော့ ချစ်တယ်ဆိုတာဟာ လုပ်ယူပြီး ပြောယူနေရတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကအတိုင်း သူ့အလိုလို ဖွင့်ဟမိပါတယ်။ … Read more
ယောင်္ကျားတွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး ဆိုတာ လောကကြီးမှာရှိပါတယ်။ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေးတွေကိုပါ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ( ၁ ) ဥာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဥာဏ်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ( ၂ ) ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးမှာရှိပြီး အားပေးနေသူ။ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးနားကနေ အားပေးနေပြီး သူရှိတော့ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ ( ၃ ) ကိုယ့်ရဲ့အားသူချက်ဆိုတာ ဘယ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ။အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို ကြိုးပမ်းနေချိန်၊ သူက ကိုယ့်ကို အမြဲအားပေးနေတယ်။ အားပေးတာတစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာကိုပါ သင်ပြပေးသူပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းကအတော်ဆုံးပဲလို့ … Read more
အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အနွေးဓာတ်လေးတစ်ခု ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ….ရင်ထဲသို့ထိပါလိမ့်မယ်….
ချစ်သူကောင်လေးဆီကနေ အမျိုးသမီးတွေ လိုချင်တဲ့ အရာ (၇) ခု … နှစ်ဦးသားလက်တွဲတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေဘက်က လိုချင်တာ၊ မျှော်လင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့အချက်တွေက နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ တချို့အချက်တွေကတော့ နှစ်ဦးသားလမ်းခွဲတဲ့ထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ၁ – အချစ်ခံချင်တယ် အချစ်ခံချင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသားတွေ ထင်သလို ဂရုစိုက်ခံချင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်နေတာတွေ ပြေလျော့သွားပြီး ပျော်ရွှင်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့ အတူရှိနေရင်း လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ – လုံခြုံမှု ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကတည်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ ချုပ်တည်းမှုတွေ ရှိဖို့ ပိုသင်ကြားခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနေထိုင်ချင်တာ၊ တိုင်ပင်ချင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွဲဖော်ဆီက … Read more
ယခုလအတွက် တနင်္လာသားသမီးများ၏ မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်းအချိန် ကံကောင်းစေရန် ထီဂဏန်းများ
နိုဝငျဘာလအတှကျ တနင်ျလာသားသမီးမြား၏ ကံကောငျးစရေနျ ထီဂဏနျးမြား (Unicode) တနင်ျလာသားသမီးမြား အနဖွေငျ့ နိုဝငျဘာလမှာတော့ ထီကံကောငျးတဲ့လဖွဈနပေါတယျ။ ထီထိုးမယျဆိုရငျတဈယောကျတညျး ထိုးပါ။စပျတူမထိုးပါနှငျ့။ ဒီလအတှကျ အကြိုးပေးတဲ့ဂဏနျးအနဲ့ကတော့ ၅ အစ ၃ အလယျ ၁ အဆုံးကိုထိုးပေးပါ။ အက်ခရာ အနနှေငျ့ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ၊အ၊ဥတို့ဖွဈပါတယျ။ ထိုးရမညျ့နကေ့တော့ ကွသပတေးနဖွေ့ဈပါတယျ။ ထိုနအေ့တှကျ တနင်ျလာသားသမီးမြားရဲ့အကြိုးပေးတဲ့အခြိနျဖွဈတဲ့ မုဆိုးရှအေိုးရကိနျးအခြိနျမှာ မနကျ ၈:၂၅ မှ ၁၀:၄၈ မိနဈအကွား မှာထီထိုးပေးပါ။ ကံကောငျးပါလိမျ့မညျ။ ထီဆိုငျရဲ့ အနောကျအရပျကို မကျြနှာမူပွီး ထီထိုးပါ။ ထီထိုးပွီးလြှငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးကို မုနျ့(၅)မြိုး၊ အိမျဘုရားမှာပနျး(၅)မြိုး အားဘုရားလှူပွီး ထီပေါကျပါစလေို့ဆုတောငျးခိုငျးပါ။ ဒီလအတှကျ တနင်ျလာသားသမီးတိုငျး ကံကောငျးပါစဟေု ကြှနျုပျမှ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ 1875 Bay Din (Zawgyi) တနင်္လာသားသမီးများ အနေဖြင့် … Read more
သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးကို ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ …!!
မယုံမရှိနဲ့ !! ဘယ်မိန်းမကိုမှ အလိုလိုက်ပြီး “အဲ့လောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ယောင်္ကျား…. သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးကို ခြေထောက်ကိုင်ပြီး ဖိနပ်စီးပေးဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! သူ့အမေကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ “ဆံပင်ကိုင်တာ .. ခေါင်းကိုင်တာမျိုး”ကိုလက်မခံတဲ့ယောင်္ကျား … သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးက ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲတတ်တာမျိုး .. နားရွက်လိမ်ဆွဲတတ်တာမျိုးလေးကိုပဲ အပြုံးမပျက်ဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! ယောင်္ကျားသဘာဝ ကပြက်ကချော်နိုင်ပြီး အချိန်ကိုလေးစားရကောင်းမှန်း မသိတတ်တဲ့ယောင်္ကျား …… သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်နောက်ကျသွားရင် စိတ်ဆိုးမှာကြောက်တတ်တာကြောင့် အချိန်တိကျသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ သူတို့ကိုယ် သူတို့တောင် ဂရုစိုက်ရမှန်းမသိတဲ့ယောင်္ကျား ……. သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးနှာစီး/ချောင်းဆိုးတာလေးကအစ လိုက်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ဂရုစိုက်နေဖို့ မှာတတ်သွားကြတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဆုံးမ ဆုံးမ .. မနာခံခဲ့ဘဲ ခပ်ဆိုးဆိုးအကျင်းတွေကိုပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ယောင်္ကျား ……….. … Read more